Skype | November 2021
အဓိက > Skype
Skype အကောင့်ကိုဖျက်လိုက်တယ် - လက်တွေ့ကျတဲ့ဖြေရှင်းချက်များ
သင် Skype တွင်တည်းဖြတ်ထားသောမက်ဆေ့ခ်ျများကိုကြည့်နိုင်ပါသလား။ Skype တွင်သင် edited message ဘေးရှိ edit ခဲတံတစ်ခုကိုတွေ့လိမ့်မည်။ ၎င်းခဲတံပေါ်တွင် mouse ဖြင့်ပျံဝဲသွားသောအခါ၊ 'ဒီမက်ဆေ့ခ်ျကိုတည်းဖြတ်ထားသည်။ ' t မူရင်းစာကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်မဟုတ်သော်လည်း၊ တည်းဖြတ်ထားသည့်စာကို ၂၅.၅ ဇွန်ပြလိမ့်မည်။ 2019
ကျပန်း Skype ခေါ်ဆိုမှုများ
ကျပန်း Skype ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု - လက်တွေ့ကျတဲ့ဖြေရှင်းချက်
အခမဲ့ Skype နံပါတ်ကိုဘယ်လိုရနိုင်မလဲ။ GetaSkype နံပါတ်စာမျက်နှာကိုသွားပါ။ သင်မပြီးသေးလျှင်ဆိုင်းအင်လုပ်ရန်အချက်ပြလိမ့်မည်။ သင် Skype နံပါတ်ကိုသင်လိုချင်သည့်နိုင်ငံကိုရွေးပြီး၎င်းကိုသင့်အားပေးလိမ့်မည်။ အခြား Skype နံပါတ်ကိုရွေးချယ်ရန် Continue သို့မဟုတ်အခြားဒေသဆိုင်ရာနံပါတ်များကိုပြပါ။
Skype ကြိုတင်ကြည့်ရှုခြင်းကိုပိတ်ထားပါ - ပြtheနာများ၏အဖြေများ
Skype ကိုဘယ်လိုစမ်းသပ်မလဲ။ Skype ဖြင့်စမ်းသပ်ခေါ်ဆိုမှုပြုလုပ်ရန်။ Skype ကိုဖွင့ ်၍ သင်၏သုံးစွဲသူအမည်နှင့်စကားဝှက်ကို log in လုပ်ပါ။ Skype ဖန်သားပြင်၏ဘယ်ဘက်ခြမ်းရှိ 'အဆက်အသွယ်များ' tab ကိုနှိပ်ပါ။ 'Echo / Sound Test service' အမည်ရှိဆက်သွယ်ရန်ကိုနှိပ်ပါ။
Skype ၏မိဘခွင့်ပြုချက် - မေးခွန်းများအတွက်ရိုးရှင်းသောအဖြေ
Skype ချိန်ညှိချက်များ XML ဘယ်မှာလဲ။ Console setting များကို XML configuration file ဖြင့်စီမံပါ။ Startup တွင် Microsoft Teams အခန်း console က SkypeSettings ဟုခေါ်သော XML ဖိုင်တစ်ခုကိုတွေ့လျှင်။ x မှာ C မှာတည်ရှိပါတယ်: \_ အသုံးပြုသူများ \_ Skype ကို \_ AppData \_ ဒေသခံ \_ အထုပ်များ \_ Microsoft.23 mrt ။ 2021
သမိုင်း chatting Skype ကို
Skype chatting history - ပြresponsesနာများကိုတုံ့ပြန်ခြင်း
ကျွန်ုပ်၏ Skype အကောင့်ကိုပိတ်လိုက်သောအခါဘာဖြစ်မည်နည်း။ Skype အကောင့်ပိတ်ခြင်း၏အကျိုးဆက်များအကောင့်ကိုအပြီးအပိုင်ဖျက်ခြင်းသည်သင်၏ Skype အဆက်အသွယ်များ၊ ဝယ်ယူမှုများနှင့်စကားဝှက်မှတ်တမ်းများအပါအ ၀ င်မည်သည့်အချက်အလက်ကိုမဆိုဖယ်ရှားပစ်နိုင်သည်။ အကောင့်ပိတ်ထားပြီးနောက်သင်၏အမည်အား Skype လမ်းညွှန်မှပျောက်ကွယ်ရန်ရက်ပေါင်း ၃၀ ကြာနိုင်သည်ဟုမိုက်ခရိုဆော့ဖ်မှပြောကြားခဲ့သည်။ 2018
ဂန္ထဝင် Skype ကိုရယူပါ
ဂန္ထဝင် Skype ကိုရယူပါ - လက်တွေ့ကျတဲ့ဖြေရှင်းချက်
Skype ကဘာဖြစ်လို့ငါ့ကွန်ပျူတာကိုဆက်ပြီးပျက်နေတာလဲ။ Skype တွင်တစ်ခုခုဖြစ်ပျက်သည့်အခါတိုင်းမကြာခဏပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်အသစ်ပြောင်းခြင်းများကိုမကြာခဏထုတ်ပြန်လေ့ရှိသောမိုက်ခရိုဆော့မှ၎င်းအကြောင်းပြချက်ကိုဖြေရှင်းသည်။ သတင်းအချက်အလက်အတွက် Skype Blogs ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုကြည့်ရှုခြင်းသည်အမြဲတမ်းအသုံးဝင်သည်။ Skype တွင်အမြဲတမ်း crashing ဖြစ်စေနိုင်သောအခြားအရာတစ်ခုမှာလိုက်ဖက်မှုပြissuesနာများ၊ ဖိုင်များပျက်စီးခြင်းသို့မဟုတ် malware ဖြစ်သည်။
Skype ကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်တဲ့ပြ--နာ - ဘယ်လိုကိုင်တွယ်ရမလဲ
ကျွန်ုပ်၏ Skype ကိုအဘယ်ကြောင့်ချဲ့ထားပါသနည်း။ Skype chat ၀ င်းဒိုး၏မြင်ကွင်းချဲ့ချဲ့မှုပြသခြင်းသည်ပြသခြင်းသို့မဟုတ်စာသားချဲ့ခြင်းပconflictိပက္ခကြောင့်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ အသုံးပြုသူသည်စာသားပိုကြီးသောအင်္ဂါရပ်ကိုပြုလုပ်နေပါကပုံမှန်အားဖြင့်ပြနာရှိနေသည်။ Ease of Access -> Display ကိုသွားပါ။ Make text အောက်ရှိဆလိုက်ဒါကိုဘယ်ဘက်သို့တစ်လျှောက်လုံးပိုကြီးအောင်ပြုလုပ်ပါ (၁၀၀%) ။ ၁၀ apr ။ 2020
Skype ၏ကန့်သတ်ချက် - ရှင်သန်နိုင်သောဖြေရှင်းနည်းများ
ငါစကားပြောဆိုမှုကိုဘယ်လိုဖုံးကွယ်သလဲ? chat list ၏ထိပ်ဆုံးတွင်ရှိသော chat ကိုမဖျက်ပါနှင့်သင်ဖျက်ချင်သောစကားတွင်စာလုံး (သို့) ပေးပို့သူသို့မဟုတ်ပေးပို့သူ၏အမည်စသည်တို့ကိုရိုက်ထည့်ပါ။ လက်ဝဲ toolbar ကိုအတွက်။ ချက်တင်သည်သင်၏ချက်စကားပြောတွင်ပြန်ပေါ်လာမည်။ > ဖျက်သိမ်းပါ။
Skype ၏သတင်းစကား - ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောဖြေရှင်းနည်းများ
အဘယ်ကြောင့် Skype ကိုအသံရှုပ်ထွေးသည်? သင်၏ Skype ခေါ်ဆိုမှုအရည်အသွေးနှင့် ပတ်သက်၍ ပြproblemsနာများရှိပါသလား။ သင်၏အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှု - သို့မဟုတ်သင်၏သူငယ်ချင်း၏ - အများဆုံးသောတရားခံဖြစ်သည်။ အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုညံ့ဖျင်းခြင်းကြောင့်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများကျဆင်းခြင်း၊ နှောင့်နှေးခြင်းနှင့်အရည်အသွေးညံ့သောအသံနှင့်ဗီဒီယိုများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ပြQualityနာရှိလျှင် Call အရည်အသွေးညွှန်းကိန်းကိုလည်းသင်တွေ့လိမ့်မည်။
Skype ၏ဂန္ထဝင် mac
Skype မှ Mac - ဖြေရှင်းနည်းများကိုရှာဖွေခြင်း
Skype ကိုဘယ်လိုအေးခဲအောင်လုပ်မလဲ။ သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် Ctrl Alt Esc ကို နှိပ်၍ Skype ကို နှိပ်၍ End Task ကိုနှိပ်ပါ။ သင်၏ကီးဘုတ်ပေါ်တွင် Windows key နှင့် R key ကိုတပြိုင်နက်တည်းနှိပ်လိုက်ပါ။ 2017